Fanafihana teny Itaosy cite :: Nampisahotaka ny asan-jiolahy tao amina « cash point » • AoRaha
Fanafihana teny Itaosy cite Nampisahotaka ny asan-jiolahy tao amina « cash point »
Nitangorona ny olona, teny amin’ny Cité Itaosy, omaly tolakandro hatramin’ny hariva, tamin’ny fahenoana fisiana fanafihan-jiolahy narahina fitazonana takalon’aina tao amin’ny « Cash point Airtel ». Nifampanontany ny rehetra.
Niparitaka ny resaka fa misy jiolahy manao takalon’aina ao amin’io fivarotana io. Mihidy ao ireo olon-dratsy sy ny olona lasibatra. Nihamaro ny olona nitazana teny ivelany niandry ny fihetsiky ny mpitandro filaminana amin’ny hisamborana ireo voalaza fa mpanafika. Fantatra ihany, nony kelikely, fa efa tafatsoaka niaraka tamin’ny vola ireo mpanafika. Tsy nisy nanamarina ny fisian’ny fitazonana takalon’aina lasa.
« Tsy nisy poa-basy na tifitra nataon’ny polisy sy zandary tety. Izahay kosa tsy mahafantatra ny tohin’ny ao anatiny ao nefa mba liana momba izao fanafihana mitam-basy izao”, hoy ny olona nitangorona teo akaikin’ilay toerana voatafika, nialoha ny fahazoana ny vaovao marim-pototra avy amin’ny Polisim-pirenena.
Vehivavy lehibe lasibatra
Milaza ny polisy, tao anatin’ ny tatitra nalefan’izy ireo, fa nisy jiolahy roa tsy nisaron-tava nitondra basy sy sabatra nanafika an’io fivarotana lehibe io. Niatrana teny an-toerana, rehefa naheno ny antso vonjy, ny Hery vonjitaitran’ny polisy (Uir sy Sag) ary ny zandary. “Norobain’ireo olon-dratsy ny vehivavy lehibe, manodidina ny 50 taona, izay tompon’andraikitra ao amin’ilay toerana. Norahonana tamin’ny basy sy sabatra izy. Lasan’ireo jiolahy ny vola dimy tapitrisa ariary sy finday maromaro teny aminy. Tafaporitsaka avy eo, ireo mpanafika”, hoy ny fanazavana avy amin’ny Polisim-pirenena.
Isan’ireo nijoro teo ivelan’ny fivarotana ny lehilahy iray, hatramin’ny fito ora hariva, niandry ny vadiny miasa ao amin’ity toerana lasibatra ity. Nitebiteby sy natahotra mafy izy amin’izay mety ho mahazo ny vadiny.
Minitra maromaro taorian’izay, afaka namonjy fodiana soa aman-tsara ilay vehivavy mpiasa. “Nitantara ny vadiko fa nisy roa lahy nanafika tao am-piasana. Telo vavy izy ireo no tratra teo ka nasain’ireo jiolahy nivoaka izy sy ny namany iray. Voaroba kosa ilay vehivavy fahatelo. Tafavoaka tany ivelany sy afaka niantso vonjy ny vadiko”, hoy ilay lehilahy.
Fandikana ny fitsipika fivezivezena Mpiasa maromaro naiditra fonja kely
Ady amin’ny halatr’omby Mpimasy roa voasambotra
Asan-jiolahy Misesisesy ny fanafihana mitam-basy any Tsiroanomandidy
Lozam-piarakodia :: Kamiao nifatratra tamina trano teo amoron-dalana